नेपालले जिम्बावेसँग खेल्ने | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १३ आश्विन २०७६, सोमबार १७:३३
सिङ्गापुरमा जारी त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजअन्तर्गत नेपालले मङ्गलबार जिम्बावेसँग दोस्रो खेल खेल्ने भएको छ ।
सिङ्गापुरस्थित इन्डियन एसोसिएशनको मैदानमा हुने उक्त खेलमा नेपालले जीत हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ टेष्ट राष्ट्र जिम्बावेविरुद्व मैदानमा उत्रनेछ । खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः१५ बजे हुनेछ । उक्त सिरिजअन्तर्गत यसअघि शुक्रबार सम्पन्न पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बावेसँग पाँच विकेटले पराजित भएको थियो ।
दोस्रो खेलमा नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै सिङ्गापुरलाई नौ विकेटले पराजित गरेको थियो । सिरिजमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाकल, जिम्बावे र आयोजक सिङ्गापुरले समान दुई–दुई अङ्क जोडेका छन् । गएराति सम्पन्न खेलमा जिम्बावे सिङ्गापुरसँग पराजित भएको छ । सिङ्गापुरले जिम्बावेलाई चार रनले पराजित गरेको हो । अङ्क तालिकामा नेपाल रन रेटको आधारमा शीर्ष स्थानमा छ । जिम्बावे दोस्रो तथा सिङ्गापुर तेस्रो स्थानमा छ । डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइएको उक्त सिरिजको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ ।
श्रमिक महिला दिबसको अवसरमा भएको दौडमा पवित्रा पहिलो
अन्तराष्ट्रि श्रमिक महिला दिबसको अवसर पारेर गोरखा सदरमुकाममा आईतवार बिहान भएको दौड प्रतियोगितामा पवित्रा बयलकोटी
आँबुखैरेनी बितरक संघ र बजार बिक्री प्रतिनिधि संघ बिच मैत्रिपूर्ण फुटबल
तनहुँको आँबुखैरेनीलाई केन्द्र बनाएर ब्यापार ब्यवशाय गर्दै आएका ब्यवशायी आवद्ध आँबुखैरेनी बितरक संघ र नेपाल
द्रब्यशाह क्याम्पसमा नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुको स्वागत
गोरखा नगरपालिका ९ लक्ष्मीबजारस्थित द्रब्यशाह बहुमुखी क्याम्पसले नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुको स्वागतमा बिहिवार बिविध साँस्कृतिक कार्यक्रम गरेको
गोरखा मैत्रीपूर्ण भलिबल ट्रफिको उपाधी कर्मचारी टिमलाई
महाशिवरात्री तथा सेना दिबसको अवसरमा गोरखामा आज आयोजित ‘गोरखा मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगिता ट्रफि’ को उपाधी